အတတ်ပညာ တရုတ်နှစ်ထပ်ဂျာစီ Jacquard မြို့ပတ်ချည်ထိုးစက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ |Morton စက်ယန္တရား
သင်၏တိကျသောအထည်လိုအပ်ချက်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Double Jersey Jacquard Circular Knitting Machine ကိုရှာဖွေလိုပါသလား။
မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့ Higher Precision Double Jersey Jacquard Circular Knitting Machine ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
1.Double Jersey Jacquard မြို့ပတ်ချည်ထိုးစက် cam box ၏ပင်မအစိတ်အပိုင်းတွင်လေယာဉ်အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။
2.Double Jersey Jacquard Circular Knitting Machine တွင် တိကျသော Archimedes ချိန်ညှိမှုကို အသုံးပြုခြင်း။
5. စက်၏ဒီဇိုင်းဘောင်အသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ dial cam box base နှင့် sleeve သည် တပြိုင်နက်တည်း နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းရှိသောကြောင့် အပ်နှင့်အောက်ခြေကြားရှိ အပ်ခံနိုင်ရည်နှင့် ကင်းရှင်းမှုကို ချိန်ညှိရန် ပိုမိုတိကျပြီး ပိုမိုရိုးရှင်းပါသည်။
6. အကြမ်းမရှိ အထူးဆွဲဆော့ဖ်ဝဲ လိုအပ်သည်။ယနေ့ခေတ်ဈေးကွက်ရှိ ပုံဆွဲဆော့ဖ်ဝဲလ်ပက်ကေ့ဂျ်အားလုံးနီးပါးကို လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
7. အထည်မျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းမှန်သမျှကို စကင်ဖတ်ကာ ပရိုဂရမ်သွင်းခြင်းဖြင့် ကွန်ပျူတာသို့ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။အရောင်ဖျော့ဖျော့နှင့် အကြမ်းမျဉ်းပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်၊ ၎င်းကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှတစ်ဆင့် ပင်အပ်ရွေးချယ်ခြင်းပရိုဂရမ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် usb disk တွင် သိမ်းဆည်းကာ လုပ်ဆောင်ရန် စက်သို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
8. မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပန်းပုံစံများကို သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။Fleuron ဒေတာကို ကွန်ပျူတာ၏ ဟာ့ဒ်ဝဲ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲဒစ်တွင်လည်း သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
ယခင်- Single Jersey Knitting စက်
နောက်တစ်ခု: စက်ရုံဆိုင်များတွင် တရုတ်ကြိုးသုံးချောင်း သိုးမွှေးထိုးစက်